Waxqabadka Caafimadka Puntland
15 Jan 15, 2013 - 4:20:30 AM
Wasaarada Caafimaadka Puntland ayaa soo bandhigtey waxqabadkeedi sanadkii tagay 2012 iyo waxyaabiha u qorsheysan sanadkan bilowgiisa aan ku jirno.
Agaasimaha guud ee Wasaarada Dr.Cabdirisaaq Xirsi Xasan oo wareysi siiyey Radio Garowe ayaa ka hadlay waxqabadkoodi 2012 oo ku soo koobey:
1-Dib u eegis qaab dhismeedka wasaarada
2-Tayeynta Cududa caafimaadka,
3-Dhismaha Xarumaha iyo ururada cafimaadka.
4-Soo bandhigida Siyaasada Caafimaadka Puntland.
5-Wacyigelino cudurada , heeganka gurmadka deg dega iyo kuwo kale oo badan.
Barnaamijka Rayiga Dadweynaha ee Radio Garowe ayaa maanta 15 January,2013 waxa looga hadlayey Waxqabadka Wasaarada ,dhaliilo loo soo jeediyey iyo weliba talooyin wax ku ool ah sidii loo dardar gelin lahaa adeega caafimaadka.
Inkastoo ay dadaaleyso wasaarada Caafimaadka Puntland haddana weli waxa baahi laga dareemaya xaalada Cisbitaalada guud ee Puntland oo aan gaariisneyn heerkii loogu talo galay.
Halkan ka dhageyso Barnaamijkan oo uu daadihinayo Cali Cabdi Fantastic More Articles